समाचार ( कपिलबस्तु )
शिवराज नगरपालिकालाई अशोक लेलैण्डले दियो बारुणयन्त्र संस्कृति : पशुपति क्षेत्र विकासका लागि ३५ करोड विनियोजन कपिलवस्तुमा थप ३ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि, कुल २७६ पुग्यो कोरोना फैलिँनुको कारण : हेलचेक्र्याइँ थप १० जनामा कोरोना संक्रमण, संक्रमितको संख्या १२० पुग्यो
शिवराज नगरपालिकालाई अशोक लेलैण्डले दियो बारुणयन्त्र
२०७८ असार ३ बिहिवार, शिवराज नगरपालिका (कपिलवस्तु )कपिलवस्तुस्थित शिवराज नगरपालिकालाई आइएमई ग्रुपअन्तर्गत सञ्चालित आइएमई मोटर्स प्रालिद्वारा प्रवर्द्धित अशोक लेलैण्डले सुविधासम्पन बारुणयन्त्र (दमकल) हस्तान्तरण गरेको छ । नेसनल फायर सेफ र आइएमई मोटर्सको संयुक्त प्रयासमा नगरपालिकालाई बारुणयन्त्र हस्तान्तरण गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
जेठ २६,काठमाडौँ - मुलुकको विशिष्ट संस्कृतिको संरक्षणमा ध्यान दिदै विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका सम्पदाहरूको संरक्षण र विकासमा विशेष जोड दिइनेछ । लोपोन्मुख भाषा, कला र संस्कृतिको संरक्षण गरिनेछ ।
जेठ ३,काठमाडौँ - पछिल्लो कोरोना परीक्षण रिपोर्टअनुसार थप ३ जानमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै नेपालमा सङ्क्रमित संख्या २७६ पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
जेठ २,बुटवल - कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न पर्याप्त तयारी नहुँदा अवस्था जटिल बन्दै गएको छ । कपिलवस्तुमा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारीदेखि स्थानीयसम्म ३० जना संक्रमित फेला परेपछि भयावह अवस्था देखिएको कृष्णनगर नगरपालिकाका मेयर रजतप्रताप शाह बताउँछन् ।
वैशाख २६,कपिलवस्तु - मायादेवी गाउँपालिका वडा नं. २ अभिरावका २ जनामा कोरोना संक्रमण भेटिएको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गरिएको परीक्षणमा गाउँपालिकाको वडा नं. २ अभिरावका १६ र २२ वर्षका पुरुषमा कोरोना संक्रमण देखिएको जनाइएको छ ।
बैशाख ४,भैरहवा - भारतमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि प्रदेश ५ का नाकाहरुबाट नागरिक भित्रिन नदिन कडा निगरानी गरिएको छ । दुई सुरक्षाकर्मीको दिनरात परिचालनपछि मानवीय आवतजावत ठप्प भएको छ ।
चैत २५,बुटवल - सरकारी अस्पतालले नै उपचार नगरेपछि ३६ वर्षीया कलामुन निशाले ज्यान गुमाएकी छन् । कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिका–६ रंगपुरकी निशालाई ज्वरो आएपछि आइतबार कपिलवस्तु जिल्ला अस्पताल तौलिहवा लगिएको थियो ।